Miparitaka any Eorôpa Afovoany sy Atsinanana ny fampifandraisana ny Coronavirus amin’ny fankahalàna vahiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2020 14:27 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, русский, polski, Ελληνικά, українська, عربي, English
Nametraka ‘scanner’ fitsapàna hafanàna tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Skopje ny manampahefana makedoniana mba hijerena ireo mpandeha avy any Azia sao dia misy ny soritraretin'ilay viriosy. Sary avy amin'ny Global voices,CC BY.
Niteraka fikorontanan-tsaina niafara tamin'ny fanavakavaham-bolonkoditra sy fanositosehana ireo mponina aziatika manerana an'i Eoropa afovoany sy atsinanana ny fanelezana ilay vaovao tsy marina momba ny valanaretina coronavirus 2019n-CoV izay niandoha tany an-tànanan'i Wuhan any amin'ny faritanin'i Hubei ao Shina.
Tany Balkàna, ohatra, dia nampiasaina hanairana ny sarambabem-bahoaka ny vaovao diso momba ilay valanaretina, vavahadin-tserasera maro no diso filaza fa tonga any amin'iny faritra iny ny viriosy, na tsy mbola nisy aza tatitra milaza fa tonga any ny tsimokaretina.
Tsy nahomby ny fanakorontanana nataon'ny haino aman-jery tany Kroasia
Mpizahatany, Shinoa sy aziatika tatsinanana maro, no mitsidika an'i Balkàna , na amin'ny alàlan'ny fandehanana amin'ny fiarabe mpitondra mpizahatany eoropeana, na amin'ny alàlan'ny fandraisana sambo misy seranan-tsambo elanelanin'ny fandehanana amin'ny fiarabe. Rehefa miantsona any Dubrovnik, Kroasia ny sambo, ohatra, dia azon'ireo mpandeha atao ny mitsidika izay mety ho tanàna any Kroasia; Montenegro, Albania, Kosovo, Makedonia Avaratra ary mifarana any Gresy izay handraisan-dry zareo ilay sambo any Tesalonika.
Ny haino aman-jery sasany dia nifidy ny hanaraka ny làlan'ireo fiarabe mitondra ireo Shinoa mpizahatany niainga avy any Italia ho any Slovenia ary mamakivaky an'i Kroasia sy Bosnia amin'ny fomba manaitaitra, nanomboka tamin'ny fotoana nidirany ny sisintany ka hatramin'ny fepetra fiarovana noraisin'ireo tanàna tsirairay nolalovany.
Indraindray dia hitàna ny maha-olona ireo tantara ireo, tahaka ilay iray momba ny “fepetra amin'ny tany misy hotakotaka” tany amin'ny sisintanin'i Kroasia rehefa tonga ireo fiarabe nitondra ireo shinoa mpizahatany. Notantarain'ilay tatitra ny “tomany sy fialantsinin'ireo ankizivavy roa avy any Shangai tamin'ireo mpandeha hafa [tsy shinoa]” noho ny fahataràny.
Dikasarin'ny vokatry ny fikarohana sary tao amin’ ny Google niaraka tamin'ny tenifototra “nismo iz Kine” (“tsy mila ny avy any Shina “). Fampiasàna ara-drariny.
Rehefa navoakan-dry zareo tao amin'ny pejy Facebook Dnevna doza prosječnog Dalmatinca (“Fatra isanandro ho an'ny mponin'i Dalmasia salantsalany”), lasa nalaza be ny sarin'ireo taiwane mpizahatany izay mamakivaky ny tanànan'i Sibenik niaraka tamin'ny marika hoe “Nismo iz Kine” (” tsy avy any Shina izahay”) . Nankalazaina tahaka ny hatsaràna ao anatin'ny toe-javatra mampalahelo tantarain'ireo haino aman-jery ao amin'ny faritra sy any ankoatry ny faritra ireo sary ireo.
Navoakan'ny lisitry ny gazety Večernji ny tafatafa iray nifanaovana tamin'i Xiaotong Chen-Li, tompon'ny trano fisakafoanana shinoa/aziatika miisa dimy any Zagreba. Nolazainy fa na toa malina kokoa aza ny olona, tsy hitany hoe nihena ny isan'ny mpanjifa — vokatra avy ao an-toerana no tena ampiasain'ny toeram-pisakafoanany ary avy any amin'ireo firenena mpikambana amin'ny vondrona eoropeana ihany no afarany ny ambiny.
Faniratsiràna sy fialàntsiny any Makedonia Avaratra
Nitombo ihany koa ny isan'ireo mpizaha tany aziatika any Makedonia Avaratra tato anatin'ny taona vitsivitsy tonga mivahiny any Makedonia Avaratra izay tany mahavokatra fandisoana vaovao. Gazety iray ao an-toerana no nampiely fanamafisana tsy marina, mikasika mpitsabo bolgara iray, izay milaza fa afaka manasitrana io aretina io ny fisotroana toaka.
Ny 29 Janoary 2020, nisy mponin'i Skopje nandefa ny lahatsarin'izy tenany nanatona vondron'olona aziatika voan'ny tamberin-tany teny afovoan'ny làlamben'ny renivohitra. Andianà lehilahy roa sy vehivavy telo miezaka mafy ny tsy hiraharaha ireo ompa ataon'ilay lehilahy no asehon'ilay lahatsary izay nandona ny hambompo ao anatinà firenena iray misy foko maro sy vahoaka tena mora tohina amin'ny resaka fanavakavaham-bolonkoditra. Nozarain'ireo mpisera amin'ny aterineto tao amin'ny Twitter sy ny Facebook ilay lahatsary, ho toy ny porofon'ny fihetsika azo henjehina .
Tamin'ny voalohany, noheverina fa mpizahatany ireo voaompa, saingy nolazain'ilay gazety mpiseho isanandro ao an-toaerana, Sloboden Pečat, fa mpikambana ao amin'ny antokom-pivavahana koreana tatsimo antsoina hoe ‘ Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL)’ (Kolontsain'ny any an-danitra, fandriampahalemana manerantany, famerenana ny fahazavàna) izy ireo. Taty aoriana, notantarain'ilay vondrona tamin'ny haino aman-jery mpanome vaovao SDK.mk fa tranga naningana iny ary noraisin'ireo Makedoniana tamin-kafanam-po ry zareo tao anatin'ny efatra taona satria nanentana atrikasa an-tsekoly momba ny fandriampahalemana sy ny fandeferana.
Niala tsiny noho ilay fihetsika fankahalàna vahiny ny ben'ny tanànan'i Skopje, Petre Šilegov ary nambarany fa ” henatra ho an'ny tanàna sy ny firenena izany” sady ” mifanohitra tanteraka amin'ny soatoavina fototr'i Skopje amin'ny maha-tanànan'ny firaisankina, mponina mifangaro ary fiombonana azy”. Naneho fialàntsiny ampahibemaso ihany koa ny praiminisitra mpisolo toerana, Oliver Spasovski, noho ilay kabarim-pankahalàna ary nitaky hetsika haingana tamin'ny ministeran'ny atitany.
Nohadihadian'ilay mpanao gazety, Dehran Muratov, monina ao Skopje, ny resaka tao amin'ny lahatsoratra fanehoankevitra iray hoe ” Aza matahotra, ny coronavirus no matahotra ho voanao” :
Ho hita ny fanafodin'ny coronavirus, fa sarotra ny hikaroka ny fanafodin'ny hadalàna, ny havendranana, faharatsiana, ny fisainana ‘petit-bourgeois’, ny tsy fisian'ny firaisankina, ny kabary fankahalàna, ny fanavakavaham-bolonkoditra …
Tsy tokony hisy ny fientanam-po hanompa vondronà olom-pirenena noho izy miyovy endrika amin'ny shinoa, satria hoe nisy nahita tamin'ny TV, [ny] aterineto na ny Facebook fa any Shina any, an-jatony ny olona maty ary an'arivony no mararin'ilay valanaretina mahafaty. Fanompàna sy faniratsiràna no solon'ny fanehoana alahelo sy fiaraha-miory.
Tsy misy fiarakaretsaka ho an'ny lehilahy miendrika shinoa any Minsk
Vao nahitàna tranganà fanavakavahana mampiseho ny fifandraisan'ny coronavirus sy ny fankahalàna vahiny mahazo ny olom-pirenena tany Belarosy, toerana ahitàna vondrom-piaraha-monina shinoa maro be noho ny fihavanana ara-politika teo amin'i Minsk sy Beijing. Tamin'ny 11 Febroary, nisy teratany Kazàka iray monina any, fantatra tamin'ny fanampinanarany hoe Nursultan, namandrika fiarakaretsaka. Rehefa tonga ilay fiara dia nandà tsy nanokatra ny varavarana ilay mpamily sady nandeha. Nifampiresaka tamin'ilay mpamily i Nursultan mba hahafantarany izay niseho ary nozarainy tamin'ny vavahadin-tserasera ny dikasarin'ny resaka nifanaovany :
Nursultan: Fa naninona ianao ny nandeha ? lol
Mpamily: Miendrika shinoa ianao
Nursultan: Izany no vokatry ny tsy fahampian'ny torohay azon'ny olona !
Mpamily: 3 robla ve no hamoizako ny aiko. Mahazoa izay tadiavina. Haha !
Nantsoin'i Nursultan rehefa avy eo ny kaompanian'ilay fiarakaretsaka izay niala tsiny sy nilaza fa tsy hiaraka hiasa amin'io mpamily io intsony.
Fanavakavahana ataon'ny vondrona aziatika sasany any amin'ny repoblika Tseky
Tany amin'ny repoblikan'i Tseky izay ahitàna vondrom-piarahamonina foko vietnamiàna marobe, nitarika hatezerana ny trano fisakafoanana aziatika iray nahitàna soratra hoe ” ho fitandroana ny fahasalaman'ny vahoaka dia tsy mandray mpanjifa shinoa ny trano fisakafoanana”.
Ny pejy Facebook-n'ny The Prague Geezer no namoaka ity sary miaraka amin'ny dikasary : ” fangitangitahana noho ny Coronavirus any CZ : Trano fisakafoanana any Vinohrady, Prague, tsy mandray ireo mpanjifa shinoa “.😯😯😯Nahazoana alàlana.
Ny pejy facebook-n'ny the Prague Geezer no namoaka ity sary ity voalohany izay nozaraina in-jato.
Tsy ela, noteren'ny hatezeran'ny vahoaka hanala ilay filazàna sy haneho fialàntsiny tao amin'ny pejy Facebook-ny ilay trano fisakafoanana, fialàntsiny manakiana ny ” tsy fahampian'ny fahalalàny ny momba ilay valanaretina” sy maneho fanenenana fa nahatonga ” zavatra ratsy kokoa noho ny tsara” ilay filazàna “tsy voahevitra tsara”.
Heloka bevava ny fanavakavahana mifototra amin'ny firazanana any amin'ny Repoblika Tseky, saingy tsy nampandrenesina ny mpitandro filaminana tamin'ity tranga iray ity.
Tranga matetika miseho any Eoropa atsinanana izay toerana malaza fandehanan'ireo mpitsangatsangana manerantany, ny fankahalàna vahiny. Italia, ohatra, dia mampiantrano shinoa 300.000, ary tsy latsaky ny dimy tapitrisa ireo shinoa mpizaha;tany nitsidika ilay firenena tamin'ny 2018. Na izany aza, dia maka tahaka ny ataon'ireo faritra sisa ny fihetsik'i Italia amin'ny fanavakavahana vahiny :
#Coronavirus Tany anaty fiarandàlamby tao Italia. Niakatra tao anaty fiarandàlamby ny tanora shinoa iray. Nisy vehivavy iray niteny mafy hoe : ” izay ary, ho voan'ny aretina isika rehetra.” Namaly azy tamin'ny teny italiana mazava tsara amin'ny fomba fiteny romàna izy : “tsy mbola nahita an'i Shina afa-tsy tamin'ny google map aho, Ramatoa.”
Karohy ny fandrakofana manokan'ny Global Voices momba ny fiantraikan'ny Wuhan coronavirus.